Iindaba -Umahluko wokhuselo lokusingqongileyo kwindawo enkulu yokuxuba
Umahluko wokhuselo lokusingqongileyo isityalo esikhulu sokuxuba
Ngenkqubela phambili yoluntu kunye nophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, imiba yokhuselo lokusingqongileyo itsala umdla ngakumbi nangakumbi. Emva kweminyaka yokusebenza nzima, isityalo sokuxuba esisebenza ngobungakanani bendalo siphumelele iziphumo zokuqala, kwaye iimpawu zaso zezi zilandelayo:
1. Ukulawula ukuphelisa imithombo yongcoliseko
Ulawulo lothuli. Isityalo sokuxuba esisebenza ngobume bendalo esingqongileyo samkela umqokeleli wothuli ofanayo ukuze azalise ngokuzenzekelayo ingqokelela yothuli, kwaye ngokuzenzekelayo angene uthuli oluqokelelweyo kwinkqubo yemveliso yokusetyenziswa kwemitha, ukunciphisa ungcoliseko lothuli lwesibini; izixhobo zokutshiza ziqwalaselwe esantini nakwiyadi yegrabile ukunciphisa ukusebenza kwesanti kunye negrabile Uthuli.
Unyango lwamanzi amdaka. Isityalo sokuxuba esisebenza ngobungakanani bendalo esingqongileyo sixhotyiswe sesahluli segrabile kunye nenkqubo yokurisayikilisha amanzi. Amanzi amdaka kunye nentsalela yenkunkuma eveliswa kukusebenza kwesikhululo sokuxuba sohlulwe kwisanti nakwigravel emva kwesahluli sentlabathi-yegrabile. Phinda ungene kwinkqubo yemveliso yamanzi ukufezekisa ukukhutshwa kwamanzi amdaka kunye nentsalela yenkunkuma.
Ulawulo lwengxolo. Isityalo sokuxuba esisebenza ngobungakanani bendalo esingqongileyo samkela inkqubo efanayo yokuvala isikhululo ukunciphisa amandla emoto nengxolo; isikhululo sonke samkela inkqubo yemoto enengxolo ephantsi ukunciphisa ifuthe lengxolo kwimeko-bume. Izixhobo zokungcangcazela kunye nezinye izixhobo zidibene neephedi zentshukumo ukunciphisa ingxolo yeVibration.
2. Cima indlela yokuhambisa
Eyona ndlela isebenzayo yezityalo ezixubayo ezinkulu-okusingqongileyo ukunqumamisa ukuhanjiswa kongcoliseko kukusingisa isikhululo sonke. Ukufakwa encapsulation ukwahlula ngokufanelekileyo umthombo wongcoliseko kwindalo esingqongileyo kunye nokulawula ukungcola kwindawo encinci, ngaloo ndlela kuncitshiswe ifuthe kwindalo esingqongileyo.
Ubuhle yinto eyimfuneko esisiseko yendalo yokuxuba enobungakanani bendalo. Isishwankathelo, kunokuthiwa indawo yokuxuba ehambelana nokusingqongileyo ngumzi mveliso wale mihla odibanisa ngokugqibeleleyo iteknoloji yokuxuba, itekhnoloji yokukhusela indalo kunye nobugcisa bokwakha. Ubume besitishi siphela buhle, buhambelana nemo engqongileyo, kwaye ucwangciso lusengqiqweni.
Isishwankathelo, isityalo sokuxuba esisebenza ngobungakanani bendalo esingqongileyo sineenzuzo eziqinisekileyo kwaye sahlukile. U-Changli uzibophelele kuphando nakuphuhliso lwezityalo ezintsha ezikhulu zokuxuba iminyaka emininzi, ethatha ukhuselo lokusingqongileyo njengoxanduva lwayo, kwaye uphumelele. Ukuba ufuna ukubonisana nokuthenga,
Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Inkqubo yokuDibanisa, Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo, Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi, Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala,